#प्रधानमन्त्री ओली | Suvadin !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार देशबासीका नाममा सम्बो...
Suvadin Media 196 0
प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएपछि अस्पताल पुर्‍याइयो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएको छ । गत फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा महत्त्वपूर्णबाहेकका भेटघाट बन्द गरेका थिए । उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राति नै प्रधानमन्त...
Suvadin Media 214 0
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल लाने तयारी
काठमाडौं । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज (आइतबार) फलोअपका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) लाने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री पेटमा राखिएको स्टन्ट निकाल्न अस्पताल लाने तयारी गरिएको हो। &ls...
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संक्रमणको आशंका, आज रिपोर्ट आउँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको आज (बिहीबार) आठौं दिन भएको छ। तर उनी अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज हुन्छन्, अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गत बुधबार मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीको आज पिसाबको रिपोर्...
Suvadin Media 231 0
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको ६ घण्टामा सकिने, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी सुरु भएको छ । प्रत्यारोपण अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीलाई १२ घण्टादेखि खालि पेट राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रक्तचाप, नाडी र शरीरको तापक्रमको मापन, रक्तचाप, मुटुको परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणमा सम्पू...
प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण आज
काठमाडौं । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । सोमबार बेलुका उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन् । १२ वर्षअघि भारतमा उनको पहिलोपल्ट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । बुधबार उनलाई आफ्नी भान्जी नाता पर्ने समीक्षाले मिर्गौला दान गर्...
Suvadin Media 545 0
प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार मिर्गौंला प्रत्यारोपण गरिने, आजै अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक गरिन लागिएको मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी पूरा भएको छ । यही बुधबार महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिने प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओली सोमबार अस्पताल भर्ना हुनेछन् । ह...
Suvadin Media 256 0
प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट उपचारपछि बालुवाटार फर्किए
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारपछि बालुवाटार फर्किएका छन् । मंगलबार साँझ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलुर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको डायलाइसीसका लागि गएका ओलि प्रधानमन्त्र...
प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला फेर्न विदेश लैजाने तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विदेश लाने तयारी भइरहेको छ । १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको उनको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएको हो । स्रोतका अनुसार प्रत्यरोपणका लागि नजिकका आफन्तहरूको मिर्गौला परीक्षण भइरहेको छ। प्रधानमन्त...
Suvadin Media 182 0
प्रधानमन्त्री ओलीको पाँचौ पटक डायलासिस, डिस्चार्ज अझै अनिश्चित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार पाँचौ पटक डायलासिस गरिएको छ। एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियाका लागि मंगलबार महराजगंजस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्प्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका ओलीको उपचार प्रक्रिया जारी रहेका बेला बुधबार साँझ करिब चार घण्टा लगाएर डायलासिस गरिएको हो।&nb...
प्रधानमन्त्री ओलीको मुटुको चाल सामान्य बन्दै, भेटघाटमा निषेध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएको छ । स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखिएपछि सुस्त गतिमा चलेको मुटुको चाल सामान्य बनाउन दिइएको इनो ट्रोप नामक औषधि बन्द गरिएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री होसमा आएका छन्, तर अत्याधिक कमजोरी र सघन उपचारको आवश्यकता भएकाले उनलाई...
नियमित परीक्षणका लागि गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । नियमित परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर सेन्टरमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मङ्गलबार बिहान गएका ओलीलाई चिकित्सकहरुले भर्ना हुन सुझाव दिएपछि भर्ना गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्...
प्रधानमन्त्री ओलीले सागमा सहभागी हुने खेलाडीलाई आज सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औँ संस्करणमा सहभागी हुने सबै खेलाडीलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओली सबै खेलाडी तथा पदाधिकारीसँग काठमाडौँमा भेट्नका लागि बोलाएका छन् । मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा...
प्रधानमन्त्री 'नायक' बनेको हेर्ने जनअपेक्षा
काठमाडौं । निकै ठूलो जनअपेक्षाका परिणाम आज मुलुकको प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली छन् । जतिबेला अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली हिजो प्रतिपक्षी दलका नेता थिए, त्यतिबेला भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी सडकबाटै चर्को विरोध गरेका थिए । त्यो सयमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालभित्र संकटपूर्ण जीव...
भारतको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री ओली संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदै
काठमाडौं । भारतले हाल सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी परेपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई बोलाएको छ। सोमबार बिहान साढे ११ बजे बस्ने बैठकमा समितिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीमा विवाद समाधानका लागि भएका समस्या समाधानबारे...
Suvadin Media 228 0
बाकु पुगे प्रधानमन्त्री ओली, नामको शिखर सम्मेलन आजैदेखि
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार अजरबैजानको बाकु पुगेका छन् । उनी असंलग्‍न राष्ट्र (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार नै त्यसतर्फ गएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएअनुसार उनलाई विमानस्थलमा अजरबैजानका उपप्रधानमन्त्री अली अहमदोभले स्वागत गरेका थिए । सो...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोसँग अरजबैजानको राजधानी बाकुमा भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहीबार त्यसतर्फ जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको साइडलाइनमा भेनेजुयलाका कम्युनिस्ट शासक मडुरोसँग दुईपक्षीय वा...
Suvadin Media 223 0
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार अजरबैजान जाँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहीबार (७ कात्तिकमा) अजरबैजान जाने भएका छन् । असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी जान लागेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री तीन दिनका लागि अजरबैजानको बाकु जाँदै हुनुहुन्छ । असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएर उहाँ फर्किनुहुन्छ, अरू कार्यक्रम छ...
सातै प्रदेशमा फोरजी, प्रधानमन्त्रीले औपचारिक शुभारम्भ गर्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले महत्त्वकांक्षी फोर जी/एलटीई सेवाको नेटवर्क आजदेखि विस्तार गर्ने भएको छ । यसअघि १७ पुस ०७३ देखि काठमाडौं र पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालन गरेको टेलिकमले त्यसको झण्डै ३ वर्षपछि सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अघि सारेको महत...
Suvadin Media 218 0
सरकारको सपना - आक्रमणको युग ?
करिब दुई साताअघि कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरणको अन्तिम दिन नेपालगञ्‍जमा नेकपा कार्यकर्ताद्वारा आक्रमण भयो । आक्रमणका क्रममा बाँकेकी कांग्रेस जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचियो । कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्‍यो । नेकपा सांसदमा संसदमा बोल्दै उक्त आक्रमणको कांग्रेसले विरोध गरे प्रतिविरोध गर्...
प्रधानमन्त्री ओलीले आज नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आज नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा आज ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र तथा पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर नेपाल’ घोषणा गर्न लागिएको हो । सोमबार मध्याह्न राष्ट्रिय सभागृहमा खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गर्ने एक कार्यक्र...
Suvadin Media 191 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (बिहीबार) स‌ंसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरिरहेका काम तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा बोल्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले खबरहबलाई जानकारी दिए । अधिकारीले भने, ‘...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य जाँचका लागि बुधबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज पुगेका छन्। सिंगापुरमा उपचार गरी गतसाता फर्किएका ओली नियमित फलोअपका लागि शिक्षण अस्पताल पुगेका हुन् । ओली यसअघि पनि स्वास्थ्य परीक्षण तथा फलोअपका लागि शिक्षण अस्पतालको मन...
Suvadin Media 244 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बुधबार बस्दैछ । पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजे बैठक बस्ने नेकपाले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिङ्गापुर उपचारका क्रममा रहेका बेला बेला अर्का अध्यक...
Suvadin Media 156 0
DilipKarki 235 0
त्रिवि उपकुलपति बन्‍न भगवानलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति तीर्थ खनियाँको भदौ ५ गतेबाट कार्यकाल सकिएपछि विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त छ । त्रिविकी शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीलाई अहिले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारले साउन २० गते त्रिविको उपकुलपति सिफारिसका लागि सहकुलपतिसमेत...
DilipKarki 279 0
काठमाडौं । सिंगापुरमा स्वास्थ्यउपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलामा बढेको एन्टीबडी झार्न प्लाज्मा फेरेसिस गर्न लागिएको हो। उनलाई दिन बिराएर सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ। प्रध...
DilipKarki 438 0
किन लुकाइयो प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था, सिंगापुरमा के-के उपचार ?
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि तीन हप्ताको बीचमा दोस्रो पटक बिहीबार सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । गत साउन १८ देखि २७ गतेसम्म सिंगापुरमा उपचार गराएर आएपछि आफ्नो शरीरका सबै अंग हातखुट्टाका नङसमेत ठिक रहेको र आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका प्...
DilipKarki 242 0
प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि आज सिंगापुर जाँदै, कहिले फर्किने टुंगो छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जाने भएका छन् । उनी आज दिउँसो १:३० बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ । तर, उनी कहिले फर्किने भन्‍ने विषयमा केही टुंगो लगाइएको छैन । यसअघि अगस्ट ३ मा उनी फलोअप उपचारका लागि सिंगापुर गएकोमा १० दिन त्यहाँ बसेर स...
DilipKarki 233 0